Aung Mon Chan's Page - Myanmar Network
Aung Mon Chan's Likes
Aung Mon Chan's Friends
Aung Mon Chan's Discussions
Digital Marketing သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်း (၇) ခု
Started this discussion. Last reply by Khine Zar Lwin May 28, 2016.2Replies9Likes
Digital Marketing ဟာ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာတဲ့ Marketing နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာတဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သင်တန်းတွေဘာတွေလဲ ရေရေရာရာမရှိသေးတဲ့အခါ ဒီနေရာဟာ…Continue
Started this discussion. Last reply by Blessing Karen Aug 17, 2016. 20 Replies 91 Likes
သင် skill အသစ်တစ်ခုခု သင်ယူချင်နေပါသလား? အပြင်မှာ ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ သင်တန်းတွေ၊ ကျောင်းတွေမှာ သွားတက်စရာမလိုဘဲ အွန်လိုင်းကနေ အလွယ်တကူ သင်ယူလို့ရနေပါပြီ.။ အောက်မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့ website (37) ခုမှာ…Continue
Started this discussion. Last reply by Nang Aye Aye Maw Aug 14, 2015.2Replies 30 Likes
ဒီဆောင်းပါးကိုရေးသားတဲ့ Inc. မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ဆောင်းပါးရှင် Murray Newlands ဟာ ဆောင်းပါးအစမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဟာသနှောပြီး ရေးသားထားပါတယ်.။ “ပုံမှန်အားဖြင့် မီလျံနာဖြစ်လာသူများဟာ…Continue
Started Jul 30, 20150Replies 8 Likes
အချို့ startup တွေဟာ အောင်မြင်ကြပြီး အချို့က ဘာကြောင့် မအောင်မြင်ကြပါသလဲ? တကယ်တော့ idea က အရမ်းကောင်းနေတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဆိုးနေတယ်ဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး.။ အချို့ startup တွေဟာ သူများတွေထက်ပိုပြီး Creative…Continue
Aung Mon Chan has not received any gifts yet